Shirkii Golaha Iskaashiga ee Maamul Goboleedyada oo dib u dhacay - WardheerNews
Shirkii Golaha Iskaashiga ee Maamul Goboleedyada oo dib u dhacay
Nairobi- Wararka soo gaadhaya WardheerNews ayaa sheegaya in shirkii Golaha Iskaashiga ee Maamul Goboleedyada ee lagu waday in bishan Oktoober 10-keeda uu ka dhaco magaalo madaxda Dowlad Goboleedka Puntland ee Garoowe, uu dib u dhacay. Waxaa wararkaasi ay sheegayaan in la filayo in shirkaasi uu qabsoomo isla bishan Oktoobar 15-da.
Lama caddeyn sababaha keenay dib u dhaca shirka, iyada oo madaxda maamul goboleedyada Puntland, Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Galmudug ay dhawaan isku arkeen magaalada Nairobi, iyaga oo sidoo kale wada hadallo la yeeshay beesha Caalamka ay ugu gudbiyeeen mowqifkooda khilaafka u dhaxeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Dowlad Goboleedyda xubnaha ka ah Dowladda Federaalka Soomaaliya, ayaa horey shir ay ku yeesheen magaalada Kismayo bshii Sebtember 4-8 . go’aan ku gaadhay in ay hakiyaan dhamaan wadashaqeyntii iyo xdhiidhkii ay la lahaayeen Dowladda Federaalka Soomaaliya.